ezaposwa ngomhla 09 / 15 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Ithala.
Bromantane powder ivuselela iindawo ezixhalabileyo ezenziwa eRussia ekupheleni kwe80 eyona nto ibangelwa ukuvimbela i-dopamine kunye ne-serotonin ebuchosheni, nangona igalelo elinokuthi lithinteke kakhulu kwizinga eliphezulu. Iziphumo zezifundo zibonisa ukuba ukudibanisa kwe-psychostimulant kunye ne-anxiolytic effect kuyasebenza ekuphatheni ukubonakaliswa kwe-asthenic. Ikhuthaza ukusetyenziswa kwemisipha kwaye isetyenziswe njengengqondo ye-psychostimulant kunye ne-immune stimulant.
Ucwaningo luye lwabonisa ukuba ukudibaniswa kwemiphumo ye-bromanthan evuselelayo kunye ne-anxiolytic iziyobisi zisebenza ngokugqithiseleyo ekuphatheni i-asthenia xa kuthelekiswa ne-placebo
Ukusetyenziswa kwesi sigulo kuqhelekileyo; Ukongezelela, ayizange ifakwe uluhlu oluvaliweyo lwe-IOC. U-Kolesov wabuye wagxininisa ukuba babhalele kwiKomiti yezoLimo ze-IOC kwiminyaka emibini edlulileyo ukubuza ukuba i-Bromantan yayisisigxina esivinjelwe, kodwa asiphendulwanga, ngoko kubonwa ngathi kukhuselekile.
Amagosa zeKomiti Olimpiki International IKomiti Medical namkhanyela siganeko kunye ingqalelo ichiza ukuba umxube steroid kunye nezinye ezisigcina eziliqela kunye arhente yokugquma, yaye kukho isibonelelo supplementary kuluhlu-IOC ngayo iziyobisi umlomo, okoko nje Iziyobisi eziphucula abadlali 'ukusebenza kungabonwa njengeziyobisi ezingekho mthethweni. Amacala omabini anemibono yazo.
Xa isetyenziswe ngomlomo, isilwanyana siphuthuma, kodwa singagxininiswa ngokupheleleyo kwi-tractinalinal tract ukuya kwigazi (ukufumaneka kwe-42%), ngokukhawuleza kunye nokukhulu kakhulu kunikwa kwizitho kunye nakumathishini, kodwa isuswa ngokukhawuleza emzimbeni. Igcinwe kwiisitifiketi ze-adipose. Isantya sokutshatyalaliswa kwe-bromantane ukusuka kwinqanaba lezintlu kumabhinqa liphezulu kakhulu, ngokulandelanayo, isiqingatha-ubomi sisifutshane kunabantu. Ixesha lokufikelela kwiinkcenkceshelo ze-bromantane egazini kuma-ASNX amahora, kunye namadoda - iiyure ze-2.75. Isilwanyana sisetyenziswe kwisibindi, kwaye ukupheliswa kwayo kubakho ngokubanzi ngendlela ye-extrarenal.
I-amino-adamantane evela bromantane, edibanisene nemiphumo yokuvuselela kunye nexhalaxytic, inyuse ukusebenza komzimba kunye nengqondo, iyancipha ukuphuhliswa kwenkqubo yokukhathala, ikhawuleza ukubuyisela kwiimeko eziqhelekileyo kunye ne-hypoxia eziyinkimbinkimbi kunye nezimo ze-hyperthermia, kuphucula iinkqubo ze-mnestic, uqeqesho; kuphucula ulungelelwaniso lweentshukumo, kuphakamisa iqondo lobushushu emzimbeni, umntu isenzo neuropsychoaktiviruyuschim (ngoko ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba mziba lengqondo), ubonisa kwingcinezelo ngokubhekiselele okulalisa of okudambisa, nemiphumo emihle inotropic ngaphandle kokuchaphazela umsebenzi chronotropic intliziyo kunye noxinzelelo lwegazi, lwenomsebenzi wokuzibulala.
Isiphumo esihle se-bromantane kwiiparitha ze-psychophysiological state yasungulwa-umthamo nokuzinza kweengqalelo, ukuphendula ngendlela eninzi, ukuphambanisa kwempumelelo yomsebenzi womqhubi. Indlela yokusebenza ye-bromantane isekelwe kumandla okwandisa umsebenzi weendawo ezincinci ze-nervous system (i-nuclei ye-hypothalamus, i-nuclei ebonakalayo yevili, i-hippocampus). Isichengiselwano asinasiphumo esicacisayo kwi-mediadergeric mediators, kodwa iyaqonda iipropati ezisebenzayo ngokusebenzisa inkqubo ye-dopaminergic. Ubungqina bentsebenzo engundoqo ye-serotonin iphakanyisiwe. Inxaxheba ethile ekuphunyezweni kwesenzo se-pharmacological ye-bromantane idlaliswa yipropati yayo yokukhusela. Impembelelo yokukhusela i-bromantane iyenyiswa xa isetyenziselwa kunye ne-bemitil.
Imibuzo ye-8 ukuzibuza ngaphambi kokuba uthathe i-Cetilistat powder	I-7 Best Nootropics (i-Smart Drugs) kwimarike yeNoopept